Dr. Tint Swe's Writings: ပြန်ဆိုတေး
သတ်ပုံတွေရေးနေရင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက်တခု ပေးချင်လာပါတယ်။
အရင်ကရေးခဲ့တဲ့သတ်ပုံတွေကို ခေတ်ကာလအရ လွယ်ကူးရှင်းလင်းအောင်ပြောင်းတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အုပ်ချုပ်သူကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကိုယ်လိုရာကို မှန်တယ်လို့ ဆရာကြီးတချို့က ပြောင်းခဲ့တာ သမိုင်းမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လည်း တော်ကြပါတယ်။ သူတို့လိုတော်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပိုတော်တဲ့ဆရာတွေကတော့ ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ကြသူတွေမဟုတ်ကြလို့ လူရာသွင်းမခံရပါ။ အဲတာလည်း သမိုင်းမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်တွေ ထုတ်မရေးလိုပါ။
ပြင်ခဲ့သူတွေက စီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာနဲ့ သည်လိုသာဖြစ်စေရမယ်။ လွဲတာကိုထုတ်ဝေခွင့်မပေး လုပ်ပါတယ်။ ကြာလာတော့ ပုံနှိပ်စာအုပ်မှတ်သမျှ ခြမကိုက် ပိုးမထိုးတာဆိုရင် အဲလိုပေါ်လစီသတ်ပုံတွေချည်းသာ ဖြစ်လာတယ်။ နောက်လူတွေက အဲတာတွေသာ အမှန်ထင်ကြတော့တယ်။ မြန်မာစာနဲ့ ဘာသာစကားဆိုတာ သိပ္ပံမှာလို ပုံသေနည်းတခုချထားရင် မပြောင်းတော့တာ မဟုတ်ပါ။
ဒီကြားထဲမှာ ဘာသာစာပေကို အလေးထားလေ့လာလိုက်စားသူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက် မြင်ဆရာ ကြားဆရာအဖြစ် တာဝန်ရှိသူတွေဆီကနေ နာယူမှတ်သားကြတယ်။ အဲလိုဆရာကြီးတွေကို အလွန်ပဲလေးစားကြတယ်။ ကျွန်တော်လို မြန်မာစာမှာ ဘာမှမဟုတ်သူကနေ အခုလိုတွေရေးတာလည်းဖတ်ကြပုံရပါတယ်။ သူတို့ဆရာတွေကသာ ခေတ်ပေါ်၊ ခေတ်မီပညာရှင်တွေအဖြစ် လက်ခံကြတယ်။ အရင်က ဘယ်လိုရေးထားခဲ့ထားခဲ့ ဦးနေဝင်းလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့အတိုင်း တပြေးညီဖြစ်ရမယ်။ မူရှိမယ်လို့ ပြန်လှန်ဆွေးနွေးပါတယ်။ အရင်ကတော့ မူပျက်တယ်လို့ပြောချင်ပုံရတယ်။ မြန်မာစာကို ယူနီဖောင်းဝတ်ပေးတာ သဘောကျပုံရတယ်။
တေးဂီတနယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ခေတ်က ပြည်လှဖေ၊ မေရှင်၊ ဂီတနက်သံကိုစောညိန်း၊ ကိုအံကြီး၊ မာမာအေး၊ မြို့မ။ နောက်လူတွေက အဆိုတော်သစ်တွေနဲ့သာ စခန်းသွားလာကြတယ်။ နောက်အဆိုတော်တွေကလည်း ခေတ်ဟောင်း သီချင်းတွေပဲ ပြန်ဆိုကြတယ်။ နောက်လူတွေက ပြည်လှဖေဆိုတာကို နားမထောင်တတ်တော့ဘူး။ မေရှင်အသံကို နားမဝင်ကြတော့ဘူး။ ကိုစောညိန်းအသံ နားဝင်ပီယံမဖြစ်ကြတော့ဘူး။
နတ်သျှင်နောင်ရတုကို သတ်ပုံပြင်ဆိုမှသာ နားဝင်ချိုကြတော့တယ်။ ယူနီဖောင်းခတ်က ပြင်ရတာအတော်ခက်တယ်။ ကျွန်တော်က ဇွဲကိုတော်တော်နဲ့ လျှော့တတ်သူမဟုတ်ပါ။
မြကလောင်ရေးပြီး ပြည်လှဖေဆိုတဲ့ ဇွဲ https://www.youtube.com/watch?v=vytRoh8CSbA
Ganglion Cyst (ဂင်ဂလီယွန်)
Oily skin အဆီပြန်မျက်နှာ
Old Things အိုရ ပြိုမကျ
Organic Food (အော်ဂဲနစ်)
We Are! လူအမျိုးမျိုး အပြောအမျိုးမျိုး
Trump effect and Hate Crime အမုန်းတရားပွားများလာ
Vitamin C ဗီတာမင် (စီ)
Oily Hair ဆံပင် အဆီပြန် နေပြန်သတဲ့
တင်မိုး ဖလ်မီးအိမ် ကဗျာများ
Health Care Workers and Risks ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု...
The Poet ကဗျာသည် လူကိုစပ်၏
Bitter Pills ငှက်ဖျားဆေး
လမင်းကို ထရံပေါက်မှကြည့်ခြင်း (မြသန်းတင့်)
ဇာတ်မင်းသားနဲ့ အလှူ့ဒကာ (လူထုဦးလှ)
စာဆိုတော်နေ့ ပေါ်ပေါက်ရပုံ – ဦးဟိန်
Bird flu ငှက်တုပ်ကွေး
Burmese Literary Month စာဆိုတော်လ
Fiction and Fact အနုပညာနဲ့ သုတပညာ
Mahaparinirvana timeline ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့ခုနှစ်
25 Pyas ငွေတမတ်
KG Reader ကစွန်းပင် ဘယ်မှာ ရွှင်သလဲ
New Nationalism အမျိုးသားရေးဝါဒသစ်
Grub Hoe သံတူရွင်းလည်းတို လူလည်းအို
End of Dynasty မင်းဆက်ပြတ်ကင်းမှ စစ်မက်ကင်းရှင်းမယ်
Timelines of world history ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲ (၁/၄)
Timelines of world history ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲ (၂/၄)
Timelines of world history ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲ (၃/၄)
Timelines of world history ကမ္ဘာ့သမိုင်းရက်စွဲ (၄/၄)
Our Union သွေးစစ်သားစစ် ချစ်ချစ်ခင်ခင်
ရွေ့ လျား ရှောင် ရှား
ချင် ခြင် ချဉ်
Hot, Flat, and Crowded ပူလောင် ပြားညီ လူများသည်
ဟ ဟ ဟ
CD4 T-cells အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ
ခွံ - ခွင် - ခွန်
Castration လူကို သင်းကွပ်ခြင်း
Heart disease (1) နှလုံးရောဂါ (၁)
Heart disease (3) နှလုံးရောဂါ (၃)
National Day အမျိုးသားနေ့
Harvest season မောင်းညိုချိန်
Clean-up အဟောင်းကို သန့်အောင်လုပ်ခြင်း
New World Disorder အဆီအငေါ်မတည့်တဲ့ကမ္ဘာ
TPP ဖျက်ရင် ဘယ်လိုလဲ
After Surgery ခွဲစိတ်ထားပြီးသူ
Bad smell in nose နှာခေါင်းအနံ့ဆိုး
Life is Selfie ဘဝကို ဆယ်ဖီးရိုက်ခြင်း
ထဲ နှင့် တည်း
ပဲ နဲ့ ဘဲ
Home health care လေဖြတ်တာကို အိမ်မှာဘယ်လို စောင့်ေ...
World Television Day ကမ္ဘာ့ ရုပ်မြင်သံကြားနေ့
မြန်မာစာမှာ ဖေါ်မြူလာ ရှိသလား
သီး သည်း နှင့် သဲ
The Quack Sayars and Sayamas အရပ်ဆေးနည်း ထပ်ပြီြးေ...
Home Made Scrubs to Get Rid of Cracked Heels ဖနောင...
Zika virus no longer an emergency ဇီကာ အရေးပေါ်အဆင်...
The New Nationalism အမျိုးသားရေးဝါဒသစ်
Puri (Poori) ပူရီ
Condyloma acuminate လိင်လမ်းကြွက်နို့ ကုသနည်းများ
Precise သတ်ပုံစာ သံခိပ်
သျှင်ဥတ္တမကျော်၏ ဆယ့်နှစ်ရာသီ တောလားရတု
Two pence နှစ်ပဲနိ
Tongue thrust လျှာတစ်လစ်
ပုစွန် သား ငါး စားမလား